Madaxda dunida oo xustay sanadguuradii 75-aad ee aasaaskii Qaramada Midoobay | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Madaxda dunida oo xustay sanadguuradii 75-aad ee aasaaskii Qaramada Midoobay
Madaxda dunida oo xustay sanadguuradii 75-aad ee aasaaskii Qaramada Midoobay
Hogaamiyeyaasha dunida ayaa aallada fogaan araga kaga qeybgalay Isniintii xuska 75 aad ee aas aaska Q.M, iyadoo safmarka COVID-19, iyo dhaqaalaha liita ee caalamka ay kamid yihiin caqabadaha dunida hor yaala iyo waxtarka isku duubnimada ururka oo la unkay dagaalkii labaad ee dunida.
“QM muddo dheer ayay ka caga jiidaysay is bedel micno leh lagu sameeyo ka ddib markii ay lumisay daah furnaanta ayna u nuglaatay agendiyaasha keligii taliyaha iyo digtaatooriyadda,” ayay sheegtay haweeneydan.
Xoghayaha guud ee QM Antonia Guterres ayaa sheegay in safmarka COVID-19 uu caalamka mid kala daadsan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in QM u baahan tahay in isbedel lagu sameeyo.
“Golle masiirka ummad ka badan todobo bilyan uu gacanta ugu jira in ay ka koobnaadaan shan dal ma caddaalad baa?,” ayuu yiri madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.